Fekerka baaritaanka gabdhaha ee Sabuni oo laga hor yimid - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kursiga baartiaanka qeybaha hoose ee dumarka. Foto: Pontus Lundahl/Scanpix
Fekerka baaritaanka gabdhaha ee Sabuni oo laga hor yimid
La daabacay måndag 27 augusti 2012 kl 15.15
Wasiirada sinaanta Nyamko Sabuni ayaa sheegtay in ay la tahay in gabdhaha dhigta fasalada toddobaad iyo sideedaad in lagu sammeeyo baaritaan xubnaha tarankooda si loo ogaado in la soo guday iyo in kale hase waxaa taasi si weyn ugu hor yimid saaxiibada la jaalka ah xagga wasiirada ee ku jira isla xisbiyada isbaheysiga ee talada haya.
Guddoomiyaha xisbiga Kristiandemokrat ee aqalka baarlamanka Emma Henrikksson oo la hadashay idaacadda wararka ee Ekot ayaa sheegtay in aan loo baahneyn in la sammeeyo talada ka soo yeertay wasiirada sinaanta waxayna Emma sheegtay in hanaanka farsamo ee hadda jira ee la socodka dadaalada ka dhanka gudniinka gabdhaha in uu yahay mid wanaagsan oo waxtar wanaagsan leh.
-Waxaa aad muhiim u ah in aan aragno in howsha ay qabtaan dadka la kulma gabdhaha ka hor fasaxa xagaaga oo ah; kalkaaliyayaasha caafimaad ee iskuulada, macamlimiinta, xarumaha caafimaadka ee caadiga ah iyo xarumaha dhalinyarada in ay yihiin dad howshooda ay wanaagsan tahay, kartina u leh in ay ogaadaan hadda arrin aan anaga gadaal ka fami karno,, ayay Emma Hennirsson.
Wasiirada is dhexel galka ayaa isla hindisahan ah in baaritaan lagu sammeeyo xubnaha taranka gabdhaha waxay soo jeedisay 2006-dii ka hor inta aysan noqon wasiirada is dhex galka waxaana taasi ay dhalisay dood kulul oo iyada oo sooo jedinteeda ay wada diideen xitaa dadka kula jira xisbigeeda ee Folkpartiet, hase yeeshee hadda ayay dib u soo kcisay isla hindisahaasi ka dib markii dhowaantan loo soo xiray labo ruux gudniin ay ku soo sammeeyeen gabar ay oo ay dhaleen oo saddex sano jir ah.